Sunscreens For Summer! (မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် နေလောင်ကာ ၈ မျိုး)
Beauty, Beauty, Health, Lifestyle
Sunscreens For Summer!0563
The KaungHtet April 5, 2022 10:06 am April 5, 2022
နွေရာသီရဲ့ ပူပြင်းတဲ့နေပူဒဏ်က မိမိရဲ့ အပေါ်ယံအရေပြားကို အကာအကွယ်မဲ့စွာ ထိတွေ့ခြင်းက မလိုလာတဲ့ဆိုးကျိုးများစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
မရွယ်မတိုင်မီ အရေးကြောင်းများပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ တင်းတိပ်မှဲ့ခြောက်ထွက်ခြင်း၊ အသားအရောင်မညီညာခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးအဆိုးဆုံးအခြေအနေဖြစ်တဲ့ အရေပြားကင်ဆာအထိ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကဲ.. ဒီလိုဆို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ?
နေပူထဲထွက်လျှင် UV ပါသောထီးဆောင်းပါ။ အင်္ကျီလက်ရှည်အပါး (သို့) အပေါ်ထပ်တစ်ခုခု ဝတ်ဆင်ပါ။ အရေးကြီးဆုံးအနေဖြင့် နေလောင်ကာ (Sunscreen) တစ်မျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပါ။
Sunscreen ရွေးချယ်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံလို အပူပိုင်းစိုစွတ်တဲ့ဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှသားများအနေဖြင့် အနည်းဆုံး SPF 50 နှင့် PA+++ ပါဝင်တဲ့ နေလောင်ကာများကိုအသုံးပြုသင့်ပြီး ရွေးချယ်သင့်တဲ့ Sunscreen (၈) မျိုးကို Shop App မှ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
BIODERMA – Photoderm Aquafluide Light
UVA/ UVB နဲ့ Cellular Bio-Protection ပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဆိုးကျိုးများနှင့် အရေပြားဆဲလ်ကိုကာကွယ်ပေးတာကြောင့် မရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ Combination နှင့် Oily Skin သမားများအတွက်သင့်တော်ပြီး ရေကူး (သို့) Outdoor အားကစားများပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ထပ်တလဲလဲ လိမ်းသင့်ကြောင့် အကြံပြုထားပါတယ်။
စျေးနှုန်း – ၂ သောင်းဝန်းကျင် (၄၀ မီလီ)
Sunplay – Super Block
Rohto Mentholatum ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ နို့ရည်ပုံစံ နေလောင်ကာဖြစ်ပါတယ်။ SPF 81 ပါဝင်လို့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UVB) ကို အမြင့်ဆုံး (၈၁) ဆအထိကာကွယ်ပေးပြီး PA++++ ပါဝင်တာကြောင့် တင်းတိပ်မှဲ့ခြောက်နှင့် အရေပြားကင်ဆာတို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကမ်းခြေသွားသူများနှင့် ရေကူးအားကစားပြုလုပ်သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။
စျေးနှုန်း – ၁ သောင်းဝန်းကျင် (၇၀ ဂရမ်)
နွေရာသီနဲ့လိုက်ဖက်ပြီး ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Sunscreen အေးအေးကျဲကျဲလေး ရှာနေတယ်ဆိုရင် COSRX ရဲ့ Aloe Soothing Sun Cream ရှိနေပါတယ်။ SPF 50 နဲ့ PA+++ အထိပါဝင်လို့ နေ့စဉ်အသုံးပြုဖို့ အဆင်ပြေဆုံးပါပဲ။
စျေးနှုန်း – ၁ သောင်းကျော်ဝန်းကျင် (၅၀ မီလီ)
Nature Republic – California Aloe Daily Sun Block
SPF 50 နဲ့ PA+++ အထိပါဝင်ပြီး နာမည်ကြီးကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှထွက်ရှိတဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်ကိုအခြေခံကာ ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ NR ရဲ့ Sun Block မှာ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက် (၃) မျိုးဖြစ်တဲ့ အသားအရေကိုဝင်းပစွာဖြူလင်းလာခြင်း၊ အရေးအကြောင်းနှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တို့ကိုကာကွယ်ခြင်းစတဲ့ လုပ်‌ဆောင်ချက်များပါဝင်ပါတယ်။
စျေးနှုန်း – ၂ သောင်းကျော်ဝန်းကျင် (၅၇ မီလီ)
NIVEA – Sun Care Serum
စေးကပ်မှုမရှိတဲ့ Serum type ထဲကနေ့စဉ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအသုံးပြုလိုသူများအတွက် NIVEA ရဲ့ Sun Serum လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Vitamin C အဆ ၅၀ နဲ့ Acerola Cherry တို့ပါဝင်မှုကြောင့် အသားအရေမညီညာခြင်း၊ ညိုမဲခြင်းနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုဒဏ်တို့ကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဖြူစင်တောက်ပသော အသားအရေရရှိစေရန် ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
စျေးနှုန်း – ၁ သောင်းကျော်ဝန်းကျင် (၁၈၀ မီလီ)
L’OREAL – UV Defender Serum
၆ လအတွင်း ၅ နှစ်စာ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုလျှောချပေးနိုင်တဲ့ Serum type ထဲကနောက်ထပ် Brand ကတော့ L’Oreal Paris ပဲဖြစ်ပါတယ်။ SPF 50+ နှင့် PA++++ အထိပါဝင်ပြီး Matte type ဖြစ်လို့ အဆီပြန်ခြင်းသက်သာကာ ရေဓာတ်ကို ၈ နာရီကြာထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
စျေးနှုန်း – ၂ သောင်းခွဲဝန်းကျင် (၅၀ မီလီ)
CeraVe – Hydrating Mineral Sheer Tinted Sunscreen
အရေပြားဆရာဝန်များရဲ့ ထောက်ခံချက်ရရှိထားတဲ့ CeraVe Brand ရဲ့ Mineral Sunscreen ကဟာ Ceramides နဲ့ Niacinamide ပါဝင်ပြီး အိမ်မှာပဲနေနေ အပြင်ပဲထွက်ထွက် အမြဲလိမ်းသင့်တဲ့ Sunscreen လေးပါ။ ဘယ်လိုအသားအရေမျိုးနဲ့မဆို လိုက်ဖက်ပြီး Allergy Tested, Non Comedogenic ဖြစ်လို့ Sensitive သမားများပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
စျေးနှုန်း – ၃ သောင်းခွဲဝန်းကျင် (၅၀ မီလီ)
Bioré – Hydrating Mineral Sheer Tinted Sunscreen
Sunscreen လို့ပြောလိုက်ရင် Bioré ရဲ့ Watery Essence မပါလို့မဖြစ်ပါဘူး။ SPF50 PA+++ ပါဝင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားကာ ရေဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ watery essence sunscreen ဖြစ်လို့ နာမည်ကြီးလူကြိုက်များတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Composed by The KaungHtet
BiodermaBioréCeraVeCOSRXDarazDaraz MMDaraz MyanmarNature RepublicNIVEAOnline shoppingSerumShop AppShop App MMShop.comshop.com.mmShoppingShopping AppSummerSun BlockSun CreamSunplaySunscreenUVနေရောင်ခြည်ကာနေလောင်ကာ
Previous ArticleSHOP APP x RAKUTEN VIBER, “Happy Shopper” Viber Sticker Launch GiveawayNext Articleအိမ်တွင်းသင်္ကြန် ကျင်းပမယ်